Isku Diiwaangelinta Macaashyada Laba Geesoodka ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Ogow sida la isugu diiwaangeliyo qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah Context link
Ma waxaad raadinaysaa qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo? Halkan waxaa ku yaala sababaha ugu sarreeya 5 ee aad u dooran kartid UnitedHealthcare si aad u hesho Qorshahaaga Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah.
Goorma ayay tahay xilliga is-diiwaangelinta ee qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah? Ogow wax ku saabsan diiwaangelinta khaaska ah iyo xilliyada diiwaangelinta sannadlaha ah iyo goorta la isku diiwaangeliyo qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah.
Medicare waxay ka kooban tahay 4 qaybo: A, B, C iyo D. Ogow nooca adeegyada daryeelka caafimaadka uu daboolo qayb kasta oo ka mid ah Medicare, iyo halka ay Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee haysta Medicaid iyo Medicare labaduba ay ku habboon yihiin.
Sida loo helo dhakhtarka ama takhasuslaha aqbala caymiskaaga markaad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba.
Dib-u-eeg noocyada kala duwan ee Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare (SNPs) oo ogow qorshaha kugu habboon adiga haddii aad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba.
Maxay bixiyaan qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah Context link
Iyadoo ugu yaraan la helayo $0 oo carbuunta qorshaha ah, qorshaha UnitedHealthcare Dual Complete® wuxuu bixiyaa macaashyo iyo sifooyin ka badan qorshaha Original Medicare.
Maxay tahay tallaabadaada xigta si aad u hesho qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo
Way fududahay in la helo qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah, ama qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo, sida UnitedHealthcare Dual Complete®.
5 waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in la ogaado marka la dooranayo qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah waxaa ka mid ah 5 macaashyadaan la yaabka leh iyo wax kale oo badan oo dheeraad ah oo loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.17.2022 waqtiga 01:54 GALABNIMO CDT